महिलाहरु कस्ता पुरुषसँग यौनसम्पर्कमा रुची राख्छन् ? « Sajha Page
महिलाहरु कस्ता पुरुषसँग यौनसम्पर्कमा रुची राख्छन् ?
प्रकाशित मिति: December 1, 2017
महिला र पुरुषवीच हुने यौन सम्वन्ध बरे धेरै अनुसन्धान भएका छन् । र ती अनुसन्धानले धेरै निष्कर्ष निकालेका पनि छ ।
यस्तैमा हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले महिलाहरू यस्ता पुरुषसंग यौन सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् जसको शरीरमा ठूलाठूला ट्याटु कुँदिएका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ट्याटुवाला पुरुषसंग महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको हो ।
एउटै निडिलले धेरैजनामा ट्याटु कुँदिएको छ भने एचआइृभीको खतरा हुनुका साथै यसमा प्रयोग हुने रंगले क्यान्सरसम्मको डर हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । तर, अनुसन्धानले के देखाएको छ भने शरीरमा ठूला ट्याटु हुनेसंग महिला विना सोचविचार सेक्स लागि तयार हुने गरेका छन् । एजेन्सी